Kuudza umwe wako kana usingaguti
Kana usingaguti pakuvatana, unotsanangurira umwe wako sei kuti muhwisisane?
Vamwe vari kuti zvinonetsa kuudza umwe wako kana usingaguti. Inyaya inonetsa kutsanangura asi regai tigombozama tichibatsirana kuti vamwe vedu vaendewo mberi. Vamwe vanongoti Zii zvogara zvakadaro. Vamwewo vanoita zvokupopota. Anogadzirisa nyaya yake ndeupi?
Kana une mazano fanotipakurirawo.
Posted by Mai E Chibwe at 14:25 No comments:
Kuti munhu ave ngochani-chii?
Vakawanda vari kubvunza zvingava zvinoitisa kuti kumnhu ave ngochani uye kuti zvinorapika here?
Ndichazama kutsanangura maonere anoita vakadzidza nyaya iyi kuti isu tiwanewo kuihwisisa seruzivo guriko mazuvano pazviri.
Ngatichitanga nokutarisa zvikonzero zvinofungigwa:
1 Maitire edumbu ramai.
Kana ma Scientist vachiongorora nyaya yechingochani, vanoona sokuti ngochanirume zhinji vanu vane madzikoma akawanda, sokuti kupfuura vana (four). Izvi zvaonekwa pakatariswa nevanoita RESEARCH ndokuona kuti kana munhukadzi akaita mimba yomwanakomana, muviri wake unoita nguva yaunoona ma GENE anoitisa kuti mwana ave mukomana anohi pachirungu Y-CHROMOSOME, anoonekwa sokuti chigwere. Muviri wemunhu ukabata chigwere unozama kuchirapa wega. Unogadzira mushonga wekuzama kurapa. (IMMUNE RESPONSE) Saka ndizvo zvinoitika kana mukadzi ane mimba yomwanakomana. Panozvagwa mwana , mai vanosara vane mushonga uyu mumuviri. Vakabata imwe mimba yomukomana futi, votangira paya pavakasiira vowedzera kuita IMMUNE RESPONSE iyoyo futi. Pakuzosvika kumwanakomana wechina kana weshanu, Mushonga uya wawandisa mumuviri zvokuti unokanganisa kuvakwa kwemwana owandisa ma HORMONE asiriwo.
Pakuzokra kwake anokwanisa kuita ngochani.
Nyaya iyi kwahi yakanetsa maSCINTIST akawanda nokuti vakaona zvichikwanisika kuti vakomana vaviri vanozvagwa vari mapatya, umwe unokwanisa kuita ngochani umwe asiri asi vese vanga vari mudumbu rimwe chete nguva imwe chete, zvichireva kuti mai vavo vanga vane IMMUNE RESPONSE yakafana. Zvaireva kuti mapatya ese anofanira kuita ngochani kana kusaita ngonchani vese, kwete kusiyana.
2 Kuzvisarudzira wakura
Vamwezve voti bodo, munhu wega anongozvisarudzira kuva ngochani kana kusava ngochani. Mafungire awa anonetsa nokuti kana chiri chokwadi zvoreva kuti isu tese takazvisarudzirawo kusava ngochani. Ini sokuziva kwangu hakuna musi wandakambiswerofunga kuti ndoita here kana kurega kuita ngochani. Ndakangokura ndiri munhu anongodawo vakomana kubva pakubva zera. Hazviiti zvokufungwa kuti Ndodii. Saka kana tikati vanozvisarudzira, tofanirazve kuzoti chikonzero chii kuti munhu azvisarudzire kuva ngochani. Zvotaridza kuti hapana chatagona kududzira.
3 Vamwe voti kuregeredzwa:
Kune vanofunga kuti kuita zvisina mature nokuda kwekuregeredzwa. Kana ukada kuzviita, ukarangwa unokasira kuzvisiya woita munhu kwaye. Awa mafungire anonetsa kuhwisisa nokuti hazvisi nyore kuti urege vanhu vemuraini vachiziva kuti uri ngochani. Saka kuti tizoti kuregeredzwa zvinenge zvabva papi. Ndiani anokuregeredza nokuti vemhuri vanotovhunduka kana vakahwa kuti uri ngochani.
4 Kutya vanhukadzi /Kutya chombo
Kune varume vakawandisa vanotya vanhukadzi zvokuti haatokwanisi kunyenga musikana. Koitazve vasikana vakawanda vanotya mufungo wekupinzwa chombo zvokuti haatokwanisi kuita nyaya dzakadaro nevakomana. Asi tinoona kuti mukuwanda kwavo vanhu vakadai mhomho yese yavo havasi ngochani. Vashomanana pavari ndidzo ngochani. Zvoreva sokuti kutya uku hakukonzeri munhu kuita ngochani. Dai kwaikonzera vese vanotya vaidai vari ngochani.
5 Vamwezve voti chigwere chefungwa:
Kuva chigwere ndizvo hazvo asi tofanira kunatsoti svikei pachigwere chacho kuti chinotangira papi uye nengari yei. Hakuna chigwere chingaita nyika dzese seizvi, pasina anonyatsoziva kuti chakabvepi. Tinoziva kuti munyika dzese mune vanhu ngochanirume nengochanikadzi. Chigwre ichocho vakachibatepi vese ava. Vamwe vavo vanogara kure chose nevamwe ngochani, saka vakasanganepi kwavakapanana chigwere ichi? Kuti titi chigwere hazvitsananguriki.
6 Vamwe voti kutadza kukura fungwa.
Kune inohi pachirungu ARRESTED STATE. Kureva kuti wasvika pane chimwe chinhanho wobva watadza kupfuura. Zvinohi tarisai vana vadiki muone kuti vasikana vanoda kutamba nevamwe vasikana,. Vakomanawo chitamba vevamwe vakomana. Asi voruzhinji kana vazoti kurei kumakore 15 uko vasikana voda kutamba nevakomana, vakomanawo vachida kutamba nevasikana. Zvino ndipo panofungigwa kuti fungwa dzengochani dzinonge dzasungigwa pamakore asingapfuuri 8 kureva kuti anongoda kutamba nevakafanana naye asi ava munhu mukuru. Anoita rudo sezvinoita vamwe asi vaari kuda vacho ndevake. Otadza kubuda pazviri. Ongogara ari ngochani.
7 Vamwewo voti kuda kuoneregwa (Attension seeking. )
Vanoti ngochani munhu uya anongoda kuti vanhu vamuonerere zvisinei kuti ari kuita chinhu chakanaka here kana kwete. Tese tinoziva munhu wemuraini anongoda kuti vamwe vataure nezvake. Kana akashaya chokuti vataure anoita chinhu chisina mature kuti vataure. Saka apa anozviita ngochani kuti vanhu vawane chokutaura pamusoro pake. Hamenoo kuti munozviona sei asi variko vanhu vanoita zvisingaitwi nevamwe, kungoti vahi nhingi akati akazoti ndokuzoti.
8 Kureriwa kwemwana:
Vamwe voti zvinoitiswa nokurera mwanakomana mumusha usina vanhurume kana kuti mwanasikana mumusha usina vanhukadzi. Voti ivo wakareriwa zvisirizvo vakakurera vakakuitisa mabasa anoitwa nevasikana iwe uri mukomana kana kuti mabasa evakomana iwe uri musikana saka wakakanganisika fungwa hauchahwisisi kuti uri mukomana here kana kuti musikana. Ndipo mukomana anoda kunyengwa nevamwe vakomana. Musikanawo achida kunyenga vamwe vasikana. Mafungire awa anonetsa kuhwisisa nokuti kune ngochanirume dzinoda kunyenga vakomana. Kunyenga ndekwevakomana saka apa ari kuita zvinodiwa kuitwa nevakomana. Koitazve ngochanikadzi dzinoda kunyengwa sezvinongoita vasikana asi kungoti anoda kunyengwa nevamwe vasikana. Zvreva kuti mafungire awa haashandi sechikonzero chokuitisa munhu ngochani.
9 Vamwezve voti Kubatwa chibharo uri mwanana :
Variko vakawanda vanotaura kuti aimbobatwa chibharo ari mwanana (mukomana) ndokuzokura ndokuita ngochani asizve variko vakomana vaibatwa chibharo chose asi pakuzokura ndokusamboita ngochani. Saka siyano inenge iri papi ipapo? Tingazoti mabatigwe aaaiitwa chibharo chacho here kana kuti chibharo hachinei nokuti uite ngochani? Variko vasikana vaigarobatwa chibharo vari vanana vakazokura ndokuvenga vanhurume chose zvokuti vanongodanana nevamwe vanhukadzi. Asi varikozve vakawandisa vanobatwa chibharo vari vanana asi vozotadza kuita ngochanikadzi. Saka maonere awa anoita sokuti hazvisirizvo zvinokonzera ungochani .
10 Mafirimu epono
Vamwe voti kana mwana akatanga kuona pono akatanga nokusangana ne varume vachiisana pachavo kana kuti vakadzi vachiisana pachavo, akaita nguva achingoona pono dzakadai pasina zvimwewo zvinotaridza varume nevakadzi, zvinokwanisa kuitisa mwana ngochani kana azoti kurei. Vanoti EXPERIENCE yemunhu pane rimwe zera inokwanisa kukonzera kuti fungwa irerekere kuhungochani.
Izvi ndizvo zvimwe zvezvikonzero zvinofungigwa kuti zvinoitisa ungochani. Asizve totarisa tinoona kuti kungochanirume kune zvimwe zvomuviri zvinowanikwa pangochanirume zvakaita seizvi?
Ngochanirume pamberi pavo vanhu vane mabhora akakura kupfuura varume vanongoda akadzi chete. Kana kuchitariswa AVERAGE yekukura kwemabhora avo zvinoonekwa kuti iri mberi.
Ngochanirume kukura kwechombo AVERAGE yacho iri mberi kupfuura varume vanongoda vakadzi chete.
Hapana anonatsohwisisa kuti zvinoitiswa nei uye sei vamwe varume vane zvombo zvikuru chose vasiri ngochani?
Zvinozikamwazve kuti ngochanirume dzinehununzvatunzva zvokuti kugara nomunhu umwe chete zvinovanetsa. Vanoda kuti akavata nouyi, ovatazve nouyo. Asi kana vakaroorana varume vese, vanochengetana kupfuura murume nomukadzi vakaroorana. Zvino varume vanoroora vakadzi kuhura kwavo kwakawanda chose asi vachihura nevamwe vakadzi. Zvinoita sokuti varume vanoita 33% yevarume vanoda vakadzi, vanohura chose. Mukutariswa zvinoonekwa kuti mabhora avo akati kurei kupfuura evarume vasingahuri kana varoora, 67%. saka zvese varume vanofarira kuhura, nengochanirume, vane mabhora makuru pamberi. Kana uri munhukadzi ukanyengwa nomurume, ukahwisisa kuti ane mabhora makuru, chenjerera nokuti anokwanisa kukasira kukuhurira noumwe mukadzi kana kuti noumwe murume.
Varume vanoroora vakadzi kazhinji havadi vakadzi vavo sekudanana kunoita varume vaviri vakaroorana kana vakadzi vaviri vakaroorana. Inyaya inotonetsa kuhwisisa.
Chikuru pano ndechokuti ukaziva kuti mwana wako ingochani unoita sei? Vanhu ngochani vakawanda vakabvunzwa mubvunzo unoti iwo “Wakaziva riini kuti uri ngochani?” Vakawanda vanoti vaziva kare kare vari vanana makore asati asvika gumi nemaviri. Saka iwe mwana wako anokwanisa kuziva achiri ku PRIMARY SCHOOL. Hwisisa kuti hapana zvaunokwanisa kuita kudzivirira mwana kuti asaita ngochani. Asi unokwanisa kuti ukaziva kuti mwana ari kutaridza kuva ngochani, anokwanisa kukuvadzwa nevamwe vana muraini nokuti vakawanda havazvifariri.
Mazuvano e SOCIAL MEDIA unokwanisa kuzoona mwana wako atogwa pikicha yapositiwa pa WHATSAPP nyakuposita achirotomoka pamusoro pemwana wako. Chii chaunozokwanisa kuita?
Ngochani dzakawanda zvakadii?
Ava ndevemu Germany chete. Imwe neimwe nyika ine ngochani asi kungosiyana mawandire adzo chete. Zvinohi kana tikatora vanhu vepasi rese vanoita zvechingochani vari pakati pe 2% ne 11% asi varume ngochani vakawanda kupfuura vakadzi ngochani. Saka vanokwanisa kusvika 700 Million kana kuti pfuurei.
Kana vachiverengwa seizvi vanoverengwa vese kubva pane vanozviti ingochani nomoyo wese kusvika vaya vanongoti akawana munhu wekuvata naye haana basa kuti munhu wacho murume kana kuti mukadzi asi kungoti anoda kuvata naye chete votovatana zvopera zvakadaro.
Kwedu kuZimbabwe ngochani variko chose uye vakangogara variko vese varume nevakadzi. Kuti uhi ngochani zvakasiyana nomunhu ane pamberi pane zvese murume nomukadzi. Aiwa. Ngochani munhu asina zvakakanganisika pakutarisa muviri wake asi kungoti anoda kuvata nevanhu vakafanana naye. Kune vamwe vakapusa vanofunga kuti hungochani hwakabva kuvarungu, izvo bodo ngochani dzakangozari nyika dzese zvisinei kuti kune varungu here kana kwete.
Vanhu vatema ku USA vane hungochani kupfuura varungu vemunyika iyoyo. Ungochani hahusi kuvarungu chete.
Ngochani vanhu vakawanda chose. Usafunga kuti vashomanana saka hazvina basa. Vakatowanda chose.
Kune nyika dzine mitemo yokuti ukaita zvechingochani unosungwa, asi mitemo yakadai haibatsiri chinhu, ngochani dzakangozara zvakafanana nokusina mitemo yacho. Ku South Afrika varume veko vamwe vasina njere vanofunga kuti kubata ngochanikadzi chibharo zvinozoita ade varume. Kusahwisisa ikoko.
Kumwe vanoti vakaziva kuti uri ngochani votsvaka kukurova. Imi vanenjere motoshaya kuti kurova kunobatsirei pahungochani.
Hwisisaizve kuti vanhukadzi vakawandisa vasiri ngochanikadzi vakangoziva kuti murume ingochani, vanoda kushamwaridzana naye chose kupfuura kushamwaridzana nomurume asiri ngochani. Ingari yokuti kana uchiita nyaya nengochanirume haakufungiri zvokuda kuvata newe. haapoti achikuongorora mazamu ako kana magaro ako. Anoita shamwari chaiyo isina zvimwe zvingaitika makaruvara kana kukuisa pamuedzo. Unokwanisa ktaura naye seshamwari sikana yako.
Saka ngochani vanovatana sei?
Pakuvatana ngochanirume vanongomisiranawo zvombo asi vese vanomira chombo. Vanorezvana sezvinongoitawo murume nomukadzi. Vanokisana, vanosvetana zvombo, vanongofongoreranawo sezvinoita murume nomukadzi asi kungoti pakati pavo umwe anofongorera umwe opinzwa kusvina uko orhojewa vese vamire zvombo nezemo. vanokwanisazve kurhojana maoko sezvinongoita murume nomukadzi kana mukadzi achitambisa chombo chomurume nemaoko kusvika murume atunda, sezvamunoita kana mukadzi ari kumwedzi murume achida kutunda. Kana kungoisa vasirina muzvidya woisa makumbo pamwe chate murume orhoja makumbo kusvika atunda. ngochanirume vanokwanisawo kuzviita asi zvidya zvavo hazvina kutsetseka sezvavakadzi.
Zvokuti apinza umwe ndeupi zviri kwavari. pamwe vanochinjana, pamwe vanoita makore umwe achiiswa noumwe iyewo asingadzoreri. Zviri kwavari.
Kuti varume vahwisise Ngochanokadzi zvinonetsa nokuti varume vakawanda havahwisisi kuti kana mukadzi ari ega achida kuzvitundisa haanei nokupinza chinhu mukati make. Nyaya zhinji dzinongoperera pakuzvikwiza bhinzi chete. Kana azova noumwe mukadzi vese vanoziva kunaka kwekukwiziwa bhinzi uye vese vanoziva kuti zvinoitwa sei sake dambudziko hapana. Vanokwizana bhinzi nemaoko, vanosvetana bhinzi, vanokwanisazve kuisa bhinzi dzavo pamwe chete vakavhura makumbo sezvigero zviviri, vokwizana bhinzi nebhinzi kusvika vatundisana.
Saka usazvinetsa kufunga kuti unonakigwa zviri nani kupfuura ngochani. Pamwe vanotori mberi nokuti kudanana kwavo kwakawanda kupfuura kwedu. Varume vaviri vanohwisisana kupfuura zvinoita murume nomukadzi. Vakadzi vaviri vanohwisisana kupfuura zvinoita murume nomukadzi. Murume anoziva kuti kana achipinza chombo kushure kweumwe murume zvinonaka sei, nokuti iye anopota achipinzwawo kumashure noumwe murume.
Mukadziwo haadzidzswi kuti bhinzi inokwiziwa sei. Vamwe vevarume vedu unokwanisa kuita gore chairo asina kana kukukwiza bhinzi zvinogutsa. Anokwanisa kuita makore mashanu asina kumbokusveta bhinzi nokuikwenya norurimi, asi vakadzi vaviri pahungochani hwavo vanoziva kuti zvinonaka sei saka vanosvetana bhinzi dzavo vachinakigwa zvisingaite. Isu mhomho tichivaseka asi pakunovata mufaro hatina. Zvobatsirei?
Kune vanopopota kuti ngochani dzinoita zvisingadiwi neBHAIBHERI saka vanofanira kudziviswa. Handirambi asi ngatipedze nyaya kwete kuita chidimbu. Bhaibheri harivanziri vanhu. Rinotaura zviri pachena kuti:
1 Varume idai vakadzi venyu sokudiwa kwamunoitwa nomusiki wenyu. Asi unoona varume vachisiya mukadzi wemahara mumba vachinotsvaka hure rine siki uye rakazara urume hwevamwe varume. Asi ipapo anopopota kuti sei ngochanirume dzichipinzana kumashure ndezvemhuka. Ko kuvata nemahure hazvisi zvemhuka here dzisingahwisisi kuti kune siki uye guchu reurume hweumer murume harisi rokuda kupinzawo chombo chako. Ndezvemhuka izvozvo saka tanga wagadzirisa nyaya yako iwe ugozowana simba rokumhura vamwe vanokanganisa.
2 Bhaibheri rotaurazve kuti vakadzi zvipei kuvarume venyu nomoyo wese nokuti mukadzi kumurume wake akafanana nekereke kumuridzi wekereke. Zvipe kumurume wako. asi inoona vakadzi vachikomburna kuti mwanasikana wanhingi ingochanikadzi. Zvinoshodesa uye hazvina unhu, asi iwe uri kurega murume wako achibuda mumba anezhara nenyota yokuvatana kuita seasina mukadzi.
3 Bhaibheri rinoti usaita upombwe asi zvese varume nevakadzi vanoona sokuti kuita upombwe zviri nani pane kuita ngochani. Kutoda kurova munhu kwahi sei uri ngochani. ko ari kukurova iwe kuti sei uri mhombwe ndianiko?
Kana wafunga kushandisa Bhaibheri panyaya dzehungochani, tnga wagadzirisa nyaya dzako iwe.
Ini ndogaroudza vanhu pano kuti veduweeka, hazvimbogozhi kugarisana nomurume/mukadzi wako mumba zvinofadza. Unongozvipira kuda munhu wako chete chete. zvese zvaunoita woita murudo. Chero uchipopota, popota une rudo mukati kuti akakumbira regerero anoziva kuti unomuregerera. Hino tinotokundzwa ngengochani.
Hazvisvodesi here kuti imi muri kufunga zvokurambana asi ngochani vamunomhura ndivo voita michato inoita upenyu hwese? Zvinofanira kushungurudza vanhu vanozvifunga. Sokuno kuUK kwavanoroorana ngochani. Unoona mukadzi nomurume vanogara NEXT DOOR vachibatana pahuro nokuhurirana, musi umwe chetewo wowona ngochani vanogara pedo vachibuda mumba vakabatana maoko vachiinda kuPARK kunofambafamba vachifugwa nemhepo vachiita nyaya vakabatana maoko. Hazvikusvodesiwo here kuhwisisa kuti uri kupiwa EXAMPLE nevanhu vaunogarotuka?
Chokupedzisira ndechokuti kana uri murume, hazvirevi kuti ngochanirume achada kukunyenga. Bodo. vanotoziva kune dzimwe ngochani saka havanei newe. Usazvinetsa hako uchifunga kuti uri munhu akanaka zvokuti ngochanirume vachada kukunyenga. Bodo.
Kana uri mukadzi usafunga kuti ngochanikadzi vachada kukunyenga. Aiwa vanozivana ivo pachavo. Zvinototiwa kana vaona kuti unokwanisawo kuda kunyengana naye iye mukadzi wacho, ndipo paanokwanisa kukunyenga. Munhukadzi wega wega anoziva zvokuita kana achida kuonekwa kuti anoda kunyengwa.
Asi kana uri munhu anoda vanhu vakafanana newe, tiudzewo mafungire ako iwe kuti chikonzero chii.
Posted by Mai E Chibwe at 14:38 2 comments:
Mukadzi asingatereri murume.
Paita mubvunzo unoti iwo, Kana mukadzi asingatereri murume zvingaitwa sei? " Mubvunzo uyu wasiiwa kumibvunzo nemhinduri 16. Mhinduro yacho yakakurisa saka ndati ndiite iri nyaya yacho yega.
Iyi Inyaya huru nokuti misha yakawanda yapara nokuti vakaroorana havazivi maitire emumba
Kana mukadzi asingatereri murume zvoreva kuti pane nyaya dzakawanda chose dzinoda kufgadziriswa pakati penyu. Chokutanga ndechokuhwisisa kuti mukadzi haana OBLIGATION yokuterera murume. Murumewo haana OBLIGATION yokuterera mukadzi. Kutererana uma menyu chinhu chamunofanira kuita pakuda kwenyu (VOLUNTARY) kuti musha wenyu ufambire mberi . Asi hazvikwanisiki kuti mukadzi kana kuti murume angomuka mangwanani ava kutoti anoda kuterera umwe wake. Bodo, zvinoda kana une chaunowana pazviri chakakodzera kuti urambe uchiwana kana ukaramba uchiterera umwe wako.
Kune varume vakawandisa vanongofunga kuti kuva nechombo zvoreva kuti munhu asina anofanira kukuterera. Handizvo. Mafungire awa inoitwa nomunhu iingahwisi kuti ari kuitei uye asingafaniri kunge ane mukadzi. Kuvaka musha kunoda sungano pauviri hwenyu uye kuti mese muhwisisane nokutaurirana zvamunofunga.
Pachivanhu chedu murume ndiye mukuru wemusha, zvisinei kuti pamakore ake okuberekwa mukuru here kana kuti mudiki pamukadzi wake. Asi kuti ahi mukuru mumba mukadzi ndiye anomupa STATUS iyoyo. Hakuna umwe munhu anomupa STATUS iyiyo zvisinei kuti ndewemhuri yake here kana kuti ndewemuraini. Kuti musha uenderere mberi murume anofanira kuhi ndiye mukuru nomukadzi wake. Kana mukadzi akasadaro murume haakwanisi kuva mukuru mumba nokuti anenge asina wekuva mukuru paari.
Saka mubvunzo unofanira kuti “ Chii chingaitwa kuti mukadzi aone murume wake somukuru mumba mavo”. Ndiyo nyaya huru yandati inoda kugadziriswa zvakawanda pairi kuti zviitike uye zvinotanga nokuti murume ahwisise kuti mukadzi haana OBLIGATION. Kukudza murume inohi VOLUNTARY action, uye anozviita kana ane chaanowana pazviri. Kana pasina BENEFIT hazvimubatsiri kukudza murume saka chero murume akasweropopota kuti heee ndoda RESPECT, heee ndoda unditerere, hapana chinobudapo. Mukadzi anongogara asina rukudzo pane zvaunotaura kana kuita.
Kana uri murume mumba uchihwisisa kuti unofanira kutungamira mhuri yako zvese nomukadzi wako, chigara pasi uterere zvandichakuudza pano.
Chokutanga ida mukadzi wako norudo gunoonekwa nemukadzi wako. Iye mukadzi wako ndiye anofanira kuhwisisa kuti unomuda nomoyo wese. Vamwe vanozviona havanei nenyaya yako. Mukadzi wako ngaazvionere ega azvihwisise kuti murume wake anomuda.
Chechipiri rongai musha wenyu pamwe chete. Kana une chainoda kuita mumusha, usachiita musina kubvumirna nomukadzi wako. Unotanga nokugara pasi nomukadzi wako womutsanangurira mafungire ako womuudza kuti unoona zvichikwanisa kufamba asi unoda kuti iye achimbofunga nazvo. Womuudza kuti ndiye achati zvoitwa here kana kwete. Kana ati kwete, mubvunze kuti sei ati kwete. Kana ati ngazviitwe, mubvunze kuti sei ati zviitwe. Motsanangurirana maonere enyu panyaya iyi. Rega mukadzi ataure maonere ake. Hwisisa nokumubvunza mibvunzo. Kana mune nyaya inokosha, musataurirana muri mumubhedha. Tauriranai makagara uye mune mukana wenyonyara zvamunofunga kuti musazozvikangamwa. Kana mukadzi akati kwete panyaya ,akakutsanangurira mafungire ake, iwe chirega kupengereka nenyaya. Chimboisiya kusvika adzoka ega kuzoti afunga zvakasiyana.
Kana uri mukuru mumba, taridza kuti uri mukuru. Kana mukapopotedzana, pane zvausingafaniri kuita panyaya yamapopotedzana. Chokutanga ukapopotawo sezvinoita vanhukadzi, zvotaridza kuti hauna kusiyana navo saka hausiwe mukuru.
Usarega kutsamwa kwenyu kuchiita kana maawa maviri. Wana mukana wekupedza nyaya zvakanaka. Kunozosviba mava kutaurirana zvakanaka. Kana ukaona akatsamwa ndiwe mukuru saka taridza EXAMPLE kuti nyaya dzinopedzwa sei. Ndiwe unodaidza mukadzi wako womuti gara pasi. Kana agara womuudza kuti:
“Mai chimwana, tatukana masikati ano pane zvataitirana zvisingafadzi. Hazvirevi kuti tave mhandu pakati bedu. Zvinongoreva kuti pane patisingawirirani kufunga. Saka tatukana zvapera, tahwisisa tese kuti zviito zvedu panyaya iyoyo zvinoda kuongorogwa. Sakai we ukabika sadza ini handingaramwi ndichiti nokuti tambotukana, iwewo chirega kunditsamwira. Ngatipedze nyaya. ”
Iwe chinyarara kusvika iye ataurawo zvaanoda kutaura. Kana ati yapera chirega ipere. Kana atangazve kupopota, rega apopote kusvika aguta. Iwe womuudza kuti wazvihwa. Pane chaanoda uite here? Zvadaro bata mukadzi wako womumbundikira womuudza kuti munhu anohwisisa uye ane rudo. Uchaona asisina hasha zvaange ari. Iwe noukuru hwako wapedza hasha.
Kana uchitaura pamusoro pemukadzi wako kune vamwe vanhu, usataura zvisina rukudzo. Taura zvinoratidza kuti iwe murume wakagona kusarudza munhu ane kodzero yokuva mukadzi wako. Mukadzi wako ngaahwisise kuti hapana chakaipa chaunotaura pamusoro pake kushamwari dzako kana hama dzako.
Panyaya dzemari, garai pasi munyore BUDGET yemwedzi wese. Hakuna mari inoti uyu anongotora oshandisa umwe asingazivi. Mukadzi anoziva kuti mari iri pazvinhu zvemumba imarii. Murumewo nohwisisa kuti kana mwedzi wondopera mari inoshota zvakadii. Kana muchironga ma PROJECT okuti muwedzere mari inouya mumba, rongai mese. Chero chinhu chidikidiki rongai mese. Mukadzi akati anoda munda wenzimbe chaiwo, kana mune panokwana kuti muite, tanga waterera mafungire ake, chisimuka undotsvaka kunowanikwa nzimbe dzokusima, wosima . Gore rinouya rega mukadzi ateme nzimbe achinotengesa nokuti iProject yake.
Kana mune vana, rega mukadzi ave murairidzi wevana. Kana ukaona mukadzi achirova mwana rega arove chero usingazvifariri. Kana mazova mega, chitaura nezvekurobwa kwemwana uye kuti mamwe maitire okuraira ndeapi. Uyawo mwana akauya kuzogara pamakumbo ababa, taurira mwana kuti ngaasakonzera mai kumurova. Ngaaitire mai vake zvakanake. Mwana ngaakure achihwisisa kuti mai nababa vari pamwe chete panyaya yekutsiura mwana.
Pakunovata, usavata wakafuratira mukadzi wako chero zvodii. Kana wafunga kufuratira, tanga wakumbira kuti ufuratire. Iye okupa mvumo iwe wofuratira. Ita tsika yokuenda kunovata nguva imwe chete nomukadzi wako. Endai nguva imwe chete. Kwete kuti uyu wotanga, umwe wozotevera, bodo. Handizvo. Endai munovata nguva imwe chete.
Mava mumubhedha dzidza kugumbatira mukadzi wako azive kuti murume wake aripo uye anomuda. Usamukonzera kufungira kuti pamwe haumudi. Gumbatira mukadzi wako womuswededza pedo newe ahwe SECURITY yapamusha pake. Moita nyaya makadaro muchinhuhwirana mumuromo kana musina kugeza mazino. Wakagumbatira mukadzi wako kudaro, mazamu ake ari pachifuva pako, terera kurira kwemoyo wake kuti kuti papi, ane EXCITEMENT here pakuva pedo nomurume wake? Taura nezvokudziya kwemuviri wake uye kufarira kwaunoita pakuva naye. Purudzira musana wake nemagaro muchiita nyaya uchiita sokuti zviri kungoitika zvega. Mukadzi ngaazive kuti chaunofarira pamuviri wake chii, chiso, mazamu, zvidya, magaro, vhidzi, maziso, muromo, matinji, etc. Ndzvipi zvinokufadza. Uchaone okupa kuti ufadzwe nazvo.
Vanhukadzi INSTINCT yedu kuriritira. Mukadzi akawana SECURITY pamusha anowedzera kuriritira mhuri yake. Kuriritira murume zvinhu zvakawanda asi kana zvimwe zvese zvaitwa chasara kuzvipa kumurume. Hapana chimwe chandinacho kuzhe kwemuviri wangu kuzvipa kumurume. Murumewo ngaachindigamuchira murudo. Kana pasina ugwere pakati penyu, itai tsika yokugaroisana pese pamunowana mukana. Zvinotaridza kuti murume anogamuchira muviri wemukadzi wake. Zvinofadza mukadzi.
Vakadzi vanogaroiswa nevarume vavo Havana hasha mumuviri kana mufungwa, havaiti nharo. Haumuoni achibuda achinopopota ari pazhe achionekwa nokuhwikwa nevanhu vemuraini. Kana akagumbuka anozvipfigira mumba ochema arimo ari ega. Kana ukamuteveramo unotokwanisa kumunyaradza, pamwe motoisana misodzi ichiri minyoro pamatama ake. Munhu ane rudo kumurume wake.
Kuisana kwakawanda kunodzivirira zvigwere zvakati wandei saka utano hwenyu mese hunowedzera. Uchaonawo kuti iwe murume unoita munhu akadzikama. Kufunga zvinovaka kunowedzera. BP pamuri mese inoita shoma.
Pakuisana kwenyu, usakasirira mukadzi wako. Hakuna chinhu chinobhowa sokunyemudzwa chombo. Kungohi koi koi (two minutes ) wotodiridzigwa usati wahwa pane moyo pakuiswa, zvinosvota zvisingaite. Kana uchiziva kuti unokwanisa kumukasirira, wedzera nguva yokutamba kwenyu muchigadzirira kuisana. Hwisisa muviri wemukadzi wako uye kuti chinomunakira chii panyaya yokuisana. Mapedza yeuka kusafuratira mukadzi wako. Usabatwa nehope iye achakasvinura. Ndiwe mukuru mumba ndiwe unotanga wapa mukadzi hope ari mumaoko ako, iwe wozobatwawo nehope. Kana akakufuratira iye iwe swedera pedo naye woisa ruoko seri kwake womuswededza pauri. Wochimurega abatwe nehope. Ndiwe mukuru.
Kana mukadzi akabika zvausingafariri, idya chete uye tenda zvawadya. Wana mukna wekumuudza kuti haufariri zvokudya zvakadaro asi wozomuudza mangwana. Zvanhasi chimbodya wakakanyarara. Kana akazokuyeuchidza kuti wakadya sokuti waizvida, muudze kuti zvabikwa na Kwini wako zvese zvakakunakira. Uchaona iye ega asisazvibiki futi.
Gara uchikudza mukadzi wako pane zvaanoita zvakanaka mumba. Ngaahwisise kuti unoona zvaanoita uye unozvirumbidza.
Shamwaridzana nomukadzi wako Kana une foni yemuhombodo, ita tsika yokutumira mukadzi wako mashoko erudo uye nyaya dzinofadza. Kana ukaona chinhu chinoitisa nyaya, tora pikicha utumire mukadzi wako, kuti paunosvika kumba muite nyaya pazviri. Garounza zvinhu kumba zvokuzopa mukadzi wako. Hazvisi zvinhu zvinodhura asi zvinhu zvinongoratidza kuti kana ukaona chinhu chakanaka, unofungawo kuti dai Mai chimwana vari pano vaonawo zvandaona izvi. Ukaona ruva rakanaka mudondo, tora pikicha utumire mukadzi wako umuudze kuti waona ruva rakumufungisa. Kana ukatonhogwa muudze kuti dai aripo usina kutonhogwa seizvi. Kana mukamboparadzana, pamunozosangana taridza kuti wange uchimushuva chose. Kana akaita ugwere, taridza kushungurudzika nazvo. Kana ane chiri kumudya moyo sokuti chimwe chiri kuitika kumhuri yake, iwe iva pedo naye avimbe newe ahwisise kuti hakuna chinhu chinokwanisa kuitika chaanoita ari ega iwe usingamusapoti.
Kana une kwawaenda, tumira mukadzi wako MESSAGE ummudze kuti uchanonoka kudzika nengari yokuti, iye kuti chii chiri kuitika.
Usahurira mukadzi wako. Pane varume vane tsika yokuti mukadzi akaramba kuiswa, murume oudza mukadzi kuti kune vakawanda vanoda kuiswa. Tese toziva kuti mahure akawanda uye havarambi kuiswa asi hachisi chinhu chokuudza mukadzi wako nokuti anozofunga kuti wazviziva sei? Chero usingahuri anokwanisa kukufungira kuti pamwe unohura. Kana mune tsika yokugaroisana mumba uye murume achitaridza rudo, kashoma chose kuti mukadzi amurambire. Vanhukadzi tinoona sokuti mukuisana mune rudo saka kana murume achitaridza kundida ini ndoisana naye chose murudo.
Usaramba kuisa mukadzi uchiti nokuti wagumbuka. Kugumbuka ndezvefungwa. Kuisana ndezvefungwa zvese nomuviri kunakigwa. Pedzera shungu pakuisana kwete pakutsamwirana. Mumba menyu mukangotanga kushotesana chete, hakuna kwamunoenda. nyaya yenyu yatotanga kuipa.
Musangoisana zvimwe chetezvo zuva nezuva kuita semusina IMAGINATIOn. Siyanisai maitire, nguva yokuita, uye kwamunoitira. Kana mari iripo, pota uchitora mukadzi wako, zvikuru ari pakati pomwedzi (PERIOD) woendawo naye kuLODGE moita weekend muriko muchishandana. Vanhukadzi vakawandisa vanowedzera zemo panguva inoita vhiki mbiri vabva kumwedzi.
Kana ukatevera zvese izvi, haumbozovi mhunhu anoshamisika kuti Seiko mukadzi wangu asinganditereri. Uchava munhu anohwa ari munhu mukuru chose mumba make.
Zama kuti mukadzi wako akudewo sezvamaiva musati machata. Maishaisana hope nokuda kwerudo. Kwezva mukadzi wako afunge kuti munhu akapiwa chipo chomurume.
Hazvirevi kuti wako achatevera zvandataura izvi asi vanhukadzi vakawnda ndiwo maonere avo kana pasina zvimwe zvisinei norudo zviri kukonejkwa nomurume zvinoshungurudza mukadzi zvinoti:
Kubhema mbanje kana fodya inonhuwa
Kusafarira kugeza muviri kana mazino
Kugaromhura mukadzi kuhama dzako iwe murume
Kuva nyope isingadi kushanda basa. Kungoswera uchingondeya neraini pasina zvauri kuita
Kushamwaridzana nevarume vasina kodzero
Kusada kuenda kuCHURCH mukadzi achida kuti uende naye kuti awaneewo chimiro pane vamwe vake.
Kushaya zvokutaura nomukadzi wako kuita sokuti haumuzivi.
Zvikonzero zvinoita kuti mukadzi asaterera murume zvakawanda hazvo asi zvizhinji zvacho zvinoitiswa nokuti iye murume wacho haahwisisi mukadzi wake. Zvikuru haana rudo kumukadzi. Chake kungotsvaka nhapwa yokugara nayo achigaropa ma COMMANDS ake aanoda kuti atevegwe. Bodo. Ida mukadzi wako uite avimbe newe.
Hwisisazve kuti kune vakadzi/varume, vasingagadziriki pakusagona kugarisana navo. Asizve iwe unenge wakatoroorana nomunhu akadai uchiziva kuti ndiwe watadza kusarudza nokuti ange akangoremara fungwa nechekare asi iwe wakazvikakavadza ukabvuma kuroorana naye. uchifunga kuti achachinja. Koitazve mukadzi akakura asina baba akangoona mai vake varuvo mukuru wemhuri. kana wakaroora mukadzi akadai, rega muite vakuru mese nokuti hapana zvaanoziva pakuona murume ari mukuru. Zvoreva kuti munofanira kuwedzera chose kutaudzana panyaya dzenyu.
Zvese zvapera kutaugwa, murume ngaahwisise kuti hakuna munhu anokuterera kana pasina BENEFIT kwaari. Kuti mukadzi abvumire murume kuva mukuru mumba, pane zvaanowana pazviri mukadzi iyeye. Kana pasina, anokasira kuhwisisa kuti ari kutambisa nguva yake achikudza munhu asina kodzero. Ndipo nyaya dzinotanga kuwanda mumba. Dambudziko kazhinji riri pamurume asingazivi kuti kuva mukuru zvinoitwa sei.
Murume ndiye mukuru mumba uye isuwo tinoda varume vedu vave vakuru mumba. Varume ivai vakuru vemhuri dzenyu. Dai zvaikwanisika maikurudzirana kuchengeta mhuri dzenyu zvakanaka. Asi sokuona kwangu varume ukaterera vachitaurirana, kazhinji vanokurudzirana kuhurira vakadzi vavo uye kudzvanyirira vakadzi vemumba. Hakuchina varume vakuru vane unhu vanoraira vechidiki sezvaivako kare. Tongohwa varume vanoda kufoseredza vakadzi kuti vaterere zvavanoda. Bodo, bodo, bodo, Kuti uve mukuru mumba, mukadzi ndiye anokuita mukuru wake nokuda kwekuti pane chakanaka chinowanikwa nomukadzi kana akuita mukuru wake. Saka iwe chiunza chacho chakanakira mukadzi agokuita mukuru wake.
Posted by Mai E Chibwe at 08:11 No comments:
Zvipukanana zvinogara pamuviri wemunhu zvakawanda chose Zvimwe zvidikidiki zvokuti hazvionekwi. Koitawo zvimwe zvinoonekwa kana ukatarisa zvakanaka. Kune INDA dzinokwanisa kuwanikwa pamunhu pazvipfekwa, mumuvhudzi uye pamberi. Kuitazve zvimwe zvakaita sezvimaGAKANJE (CRAB)
Pano toda kumboongorora zvipukanana zvinopananwa panyaya dzekuvatana , uye kuti zvinobviswa sei pamunhu anazvo. Pachirungu Zvipuka izvi zvinohi
1 PUBICLICE kana kuti CRABS (Inda dzepamberi)
Inda idzi dzakati siyanei neinda dzinowanikwa muzvipfeko kana kuti mumachira emubhedha. Kusiyana kwadzi ndekwekuti idzi dzinofarira kugara pamberi . uye dzinokushungurudza chose kana unadzo.
Kuti udziwane unenga waita chimwe cheizvi zvinoti :
Kuvatana nomunhu anadzo
Kuvata mumubhedha umwe chete nomunhu anadzo chero musina kuvatana
Kupfeka zvipfekwa zvomunhu anadzo
Chikuru pazvikonzero izvi kuvatana nomunhu ane zvipukanana izvi.
Kana waita zvinhu izvi, Pamberi panogada kukwenywa chose uye unokwanisa kukwenya wakwenyazve asi pachingovava chete. Saka zvinoreva kuti ukaona kuti pamberi pako pari kuvava, tsvaka MAGNIFYING GLASS uzviongorore pamberi kuti hapana zvipukanana zviri kufambafambapo here. Kana ukazviona kasira mhanya kuChemist undotenga mushonga wekuzvibvisa. Hwisisa kuti zvipukanana izvi hazvinei nokuti wakaveura choya here kana kwete, asi kana wazviona zviri nani kuveura choya usati watanga kushandisa mushonga. Kuverura hakubvisi zvese asi kunotapudza. Unofanira kurapiwa kusvika zvapera.
Kana une murume/mukadzi chimbomirai kuvatana kusvika mese marapiwa. Kana wakazvipiwa munyaya dzokuhura, kana une nhamba yefoni yemunhu wacho, mufonere umuudze kuti ngaakasire kundorapwa uye audze vese vaakavata navo vandorapiwawo. Hwisisazve kuti zvipukanana izvi zvinogara panomera choya saka kushandisa CONDOM hakuzvidziviriri kugovana.
Kuvarapi, kana une inda idzi unoonekwa somunhu ane chigwere chechihure saka unokwanisa kuenda ku SPECIAL CLINIC hana uri kunyika dzinorapa zvigwere zvechihure kuma SPECIAL CLINIC. Kana uri kuZIMBABWE unokwanisa kunotenga mushonga ku XHEMIST wozvirpa wega asi tanga nokuterera ma INSTRUCTION aunopiwa ku CHEMIST kwacho, uye kasira kuzvigera choya chese usati watanga kushandisa mushonga. Kana zvichikwanisika, Chandiwa mushonga miviri yakasiyana kuti wekutanga ukapera wochitanga kushandisa wechipiri.
Chigwere hacho asi chinorapika kana muri vanhu vane hanya noutano hwenyu. Mese murume nomukadzi geranai pamberi mugorapiwa mese, uye mombomira kuvatana kana muri kurapiwa, mozotangazve mapedza kurapiwa. Mohwisisana kuti chihure bodo.
Kana wangoziva kuti ine zvipukanana izvi, chiona kuti zvese zvaunopfeka zvaainiwa ne aini inopisa chose uye kuaina kwacho hakusi kwechimbichimbi. Zvikuru mabhurugwa emukati ese emukadzi neemurume, matawero ese, machira ese epamubhedha. Kana mune VACUUM CLEANER momboishandisa paMATRESS yenyu zvakawanda chose.
2 SCABIES (tsikidzi dzepamberi)
Scabies chigwere chinoita paganda remunhu chichikonzegwa nezvipukanana zve SCABIES. Unokwanisa kubatana nezvipukanana izvi kana uchigara nevahu vakawanda, zvikuru kana musina mvura yakakwanirana nokuwanda kwenyu, sokuti kumamisha kana kuti mumajeri kana kuti mazuvano kuma Detention Center avako awa,
Zvipukanana zvacho zvinofarira kuboora ganda zvogara pasi peganda zvichiitira svina imomo. Iwe wochitanga kukwenya kuita sewava neshavi rokusvibvisa ganda. Uku womera zvimapundu.
Pamwe ukaita zvimapundu zvinovava chose paganda rako, fungira kuti une zvipukanana izvi.
Pamwe unokwanisa kuita panzvimbo dzakaita semuhapwa, pasi pemazamu, muzvidya, Saka terera marapigwe azvo kana wondopiwa mushonga.
Zvese SCABIES ne PUBILICE zvinorapika nemishonga iyi inohi
Iwe kana uchienda kuCHEMIST enda wakanyora mazita awa ugokumbira vakuudze mushonga wakakukodzera, uye kuti unoshandiswa sei. Vanotanga nokukuudza kuti imbomira kuvatana nevamwe vanhu kusvika warapwa.
Veduweeka, kureverana nhema kwakaipa saka ngatitange nokubvumirana kuti kuisana kunonaka chose uye kunofadza moyo zvese nefungwa asi. Ngatizviite tichihwisisa kuti chihure chinouraya vakawanda. Kana une dambudziko mumba mako numurume/mukadzi wako panyaya dzokuisana, Kana zvichigadzirika, gadzirisai mudzokere pachirongwa chokuisana pauviri hwenyu.
Hwisisazve kuti kana muri vanhu vanogarotukana, Mukatanga SYSTEM yokugaroisana, kutukana kwenyu kunoderera mumba menyu. Uchaonazve kuti ugwere hwunoita ushoma pavanhu vanowanza kuisana. Takagadzirigwa kuti tigare pedo nevarume/vakadzi vedu kuti tigare tiri pachirongwa.
Kunotorana nezvipukanana zvomusango wouya nazvo kumba wopa munhu wawakachata naye handizvo. Bodo. Foyana naye kusvika ada zvokuisana newe, kana kuti rambanai musiyane munotsvaka vanoda zvemichato. Kana murume/mukadzi achiramba kuisana newe mumba mako, haachadi muchato wenyu. Chitauriranai musiyane nokuti munokwanisa kuurayana nezvigwere zvomudondo.
Posted by Mai E Chibwe at 13:51 No comments:
Kune vanhu zvese vakadzi nevarume vanoti zviya pakuisana voona kuti umwe wake atunda, iye onyeberawo kuti atunda kuti muchirega zvamuri kuita muvate hope. Pane anyora achiti iye haahwisisi kuti mukadzi wake angazviita here kana kwete uye kuti angazviitirei. Ini ndabvunza kuti ko iye akambozviitawo here kumukadzi akati kwete. Ari kuti kana akaziva kuti mukadzi wake azviita, ndiwo musi unopera muchato nokuti anoona sokuti mukadzi wake anenga ava murevi wenhema.
Zvino ngatione kuti kune vanozviita here uye vanozviitirei uye zvinotanga sei?
Ngatitange nokuhwisisa zvinhu zvakati wandei zvinoti:
1 Kumunhukadzi weruzvhinji kuiswa kunonaka chose zvisinei kuti wasvikwo pa ORGASM kana kwete. Pane nguva yaunongoda hako kubatana nomurume wako asi usina hanya nokuita ORGASM. Kungoisana nomurume wako chinhu chinofadza uye chinokuswededza pedo nomurume wako. Kana wakaneta unokwanisa kungopa murume muviri wako kuti ahwe rudo. Kwatiri isu kuisana nokudanana zvinhu zviri pamwe chete. Kana murume ane zemo hazvinetsi kumubvisa zemo.
2 Munhukadzi haawanzi kungoti akaona chombo chati twi iota zemo. Zvinoda kubotamba mese nokurezvana, kuswetwa minyatso, kutambiswa matinji, kupurudzigwa muviri, kukwevegwa pedo, kukisana, kupinzwa chigumwe mukati nokukwenyeregwa mukati, uku tichikisana, nokunyorova chose zasi, nokuzovhugwa makumbo murume ombopinda pakati motambazve aripo uchihwa kumira kwechombo chake uchichipurudzira, uchihwa hana ichitinhira nokuhwa zemo. Iwe muridzi paunongozotora chombo chomurume wako wochinangisa paunoda kuti chivhakashe, wega unenga wava nezemo guru. Asi hazvirevi kuti uchaita ORGASM nokuiswa nechombo. Asi zvinonaka chete.
3 Ukapepuka murume amire chombo asi ari kuhope, unokwanisa kungosuduruka wozvipinza chombo wotundisa murume wako ari kuhope. Hazvirevi kuti iwe unofanira kutundawo, asi zvinonaka chete zvakadaro.
Iyewo akapepuka iwe uri kuhope, anokwanisa kukupinza chombo motoisana iwe usina kumbopepuka. Kusvika murume akudiridzira. Pamwe unokwanisawo kuita ORGASM kuhope nokuda kwekuti wakaRERUSA muviri. Asi pamwe hauiti asi hazvirevi kuti hazvinaki.
4 Kana musina EXPERIENCE yokuisana mukadzi anokwanisa chose kuita nguva refu kana makore chaiwo asinawo kumbotunda pakuisana kwenyu. Asi anongohwa kunaka kana murume wake achihwisisa kuti anofanira kumirira kuti mukadzi anyorove. Hazviiti kuti ungohi bvisa bhurugwa wobva watopinzwa chombo ugonatsa kunakigwa nazvo, bodo. Asi pane nguvawo yaunobva kwawabva mosangana nomurume mese mune tarisiro yokuisana. Unenga wagara wanyorova kare. Uye unoda kungokasira kuiswa nomurume. Sokuti mange makaparadzana mosangana motoisana ipapo musati mamboita dzimwe nyaya. Zvakaita sokumhoresana. Mozoita nyaya mapedza uye mozoisana futi zvine mwero mamboita nyaya. Ipapo zvinongonaka futi uye unokwanisa kuti tunda nengari yokuti wange wava nevhiki yese usina kuiswa.
5 Murumewo kana akaneta anokwanisa kumira chombo mukadzi omukwira asi murume osatunda. Sokuti makaisana pakunovata asi momukirana makuseni seni. Mukadzi anokwanisa kutunda murume asatunda. Asi hatizvifariri izvi. Kusiya murume asina kutunda zvinoita se CHALLENGE kuti ndatadza basa. INSTINCT inoti regai ndizame futi.
Iyi nyaya yokusada kuvata nomurume agosakudiridzira ndiyo inoita kuti vanhukadzi vakawanda vaone sokuti ivo vanofanirawo kuita ORGASM pakuiswa. Inyaya ine zvakawanda chose mairi paPSYCHOLOGY yayo. Inokonzera vakawanda kunyebera kutunda.
Kunyebera kunoitwa sei?
Kana wakambotunda uri wega uchizvibatabata nokuzvikwizirira bhinzi, zvikuru vakambodhonza matinji, wega unoziva maitire ako kana zvauya nokuti zvinokwidibira fungwa dzese womboita sewoda kufa wozodzoka kuupenyu wotanga kudikitira , wobva wati muviti tonhoo seuri mumhepo asi ipapo uri pamubhedha. Kuhwisisa mafambire azvo uku kunoita kuti ukwanise kunyebera kuti wazviita iwe usina. Unoziva maACTION acho nekuchemerera kwacho kunoita murume afunge kuti watunda iwe usina.
Asi izvi hazvitsananguri chikonzero. Zvikonzero zvakawanda asi zvinoita sokuti chikuru chacho kufungisa murume kuti anogona kuisana newe zvinokufadza. Anobatwa nehope ane mufaro wekuti mukadzi wangu anakigwa nekuisana kwedu. Chokwadi ndechokuti unenge wanakigwawo zvechokwadi asi kungoti hauna kutunda. Hino varume havanatsi kuhwisisa kuti zvinofamba sei nokuti iye akasatunda hazvinatsi kuita iyewio isu hatidi kuti asatunda. Chero murume akapfeka CONDHOMU chaiye tinongoda kuziva kuti atunda. Ndizvo tichidawo kuti azive kuti ndanakigwa kusvika pakumuudza nhema kuti ndatunda.
Koitazve kuti pamwe muri kuisana henyu asi mukadzi haana hanya nazo nokuti murume haana kumupa nguva yezemo. Ipapo mukadzi anokwanisa kuhwisisa pokubatabata murume kuti akasire kutunda nyaya ipere. Vamwe ndipo pavanochemachema nokuita ma FAKE avo kuti murume paanotunda afunge kuti mukadzi atundawo saka zvapera.
Koitazve kana murume ari munhu asingagoni basa zvachose uye asingatereri muviri wemukadzi wake. Anongobva kwaabva kuBATHROOM uko yakamira nechekare, wongosvinyanga mazamu kaviri wototi mukadzi fongora wototanga kupinza. Pakadai mukadzi pamwe anotohwa kugwadza chose saka akawana mukana wekuti murume akasire kutunda zvipere anodaro. Inyaya yokusahwisisa kwemurume.
Kuitawo vakadzi vanoisa zvimishonga muchitubu kuti asanyorova. Zvinoitwa nevakadzi vakawanda izvi, nokuda kwekushaya ruzivo panyaya dzakukuvadza maMEMBRANE emukati. Anoti pakupinzwa, zvinogwadza asi anofunga kuti zvinonakira murume. Varumewo noufuza vanofunga kuti ndizvo. Zvinokwanisa kutokuvadza chombo. Asi zvinokwanisa kukasirisa murume kutunda. Kuzoti afungew kuti watunda wochimuuitira masaramusi enhema.
Koitazve vakadzi vasingagoni kutundiswa nokuiiswa nechombo. Mukadzi akadai anokwanisa kupedzisira oona sokuti pane chakaipa paari. Anotya kuti murume anozofunga kuti haasi mukadzi akakwana, obva anyebera kutunda kuti murume asafungira. Kana uri mukadzi akadai asingatundi nengari yechombo, hwisisa kuti chikonzero chikuru ndechokuti chombo kana chiri mukati hachigofi mudzi webhinzi nengari yokuti uri kure. Kana uchida kuzviona pima DISTANCE kubva kumusoro kweburi rechitubu kusvika panotangira bhinzi. Kana ukawana maCENTIMITER anopfuura 2.5 zvoreva kuti mudzi webhinzi yako unri kure saka kutundiswa nechombo kungangokunetsa.
Asizve unokwanisa kuchinja maitire, sokuti ukavata nedivi wosimudza gumbo riri pamusoro woripakicha pafudzi rimwe remurume. Murume okutanyanga gumbo riri pasi riya okupinza chombo. Ukangoti gonyei zvishoma unohwa kusiyana kwepari kugofiwa nechombo. Koitazve kuti kana DISTANCE yako yakapfuura 2.5 CM, wana mukana wekuti murume akukwizirira mbinzi muchiisana kana kuti iwe muridzi uzvikwizirire uku murume ari mukati. Unokwanisa chose kutunda
Kuitazve kuti murume anohwisisa bhinzi yako uye kuikwiza semakwizire aunoita uri wega. (Mudzidzise maitigwe azvo) kana kuisveta sezvaanoita munyatso wezamu kana kuinanzva. Unokwanisa kutofanotunda usati wapinzwa chombo zvokuti pakuzipinzwa hauchina chinangwa chokunyebera murume.
Hino kusiyana kwedu ndekwekuti murume akanyabera kutunda zvinoonekwa nokuti kana atunda iwe unovhinza urume. Kana asina hapana chinobuda. Pane musikana akanyora achibvunza kuti sei murume wake kana akadhakwa hapana chinobuda. Bodo ingari yokuti anokunyebera kuti atunda iye asina.
Hino mukadzi hapana chinoonekwa kuti chaitika asi kungoeredza urume hwemurume chete. Kuti murume achizoziva kuti wazvifambisa sei haachazvikwanisi.
Varume hwisisai kuti muviri wemunhukadzi wakasiyana newenyu. Hwisisazve kuti kune vakadzi vasingakwanisi kutunda nokuda kwechombo, asi hazvirevi kuti chombo hachinaki. Chombo chinongonaka zvisinei nokuti watunda here. Kurevera murume/mukadzi nhema shuwa chinhu chakaipa uyezve zvinoita kuti kana pane dambudziko rinonoke kugadziriswa. Sokuti kana murume asingahwisisi kurezva mukadzi musati maisana, hazvigadziriki kana uchimunyebera kuti watunda iwe usina. Koitazve varume, kana ukahwisisa kuti mukadzi haazi kunatsonyorova, zvinoitiswa neCONDITION inoda kuti mutsvake KY jelly (kune vakadzi vanonetseka kunyorova) kana kuti mukadzi wako ari kuzviitisa nokushandisa mishonga isina kunaka. Kana ukabata mukadzi wako achiita izvi, usazvigamuchira zvachose nokuti zvinoreva zvakawanda paupenyu hwenyu. Kune vamwe vanoudzwa kuti isai munyu zasi , kana kuti geza nemvura ine munyu wakawanda, kana kuti isa sipo yokuti neyokuti mukati wozobvisa moda kutoisana. Ukahwisisa kuti ndizvo zvaari kuita zviri nani umudzivise nokuti zvichamukuvadza mugoita nguva usina munhu wekuisana naye.
Kana achida kuti anatse kusvinya chombo pane zvaanokwanisa kuita zvaanowana apo pakahi Kusimbisa masuru yechitubu. Ngaaverenge ipapo aite zviripo.
Imi varume tibatsireiwo nokuhwisisa nyaya dzedu. Motiruramisa patinokanganisa. Usarega mukadzi wako achhita zvougino pamuviri wake. Muviri wake ndewenyu mese. Iyewo akakuona uchiita zvisina kufanira terera achikutsiura.
Varume hwisisai nyaya yokuisana iyi kuti mumba ngamuisanwe zvinonakira mese. Rezva mukadzi wako kusvika anyorova zasi zvakakwana. Mupe chombo atambisewo madire ake. Zvinotowedzera zemo rakewo.
Heino nyaya yokupedzisira. Paunotanga kuchemachema uchifunga kunyebera murume kuti uri kutundiswa nezvaari kuita, mafungire iwawo, kune vakaanda vanoti anoita kuti ubve watotundawo zveshuwa asi wange uchitonyeba. Sake pamwe zvinoita utunde. Tese takasiyana siyana. Asi ini hangu sokuona kwangu kunyeberana panyaya iyi kwakaipa chose. Muchato ngauvakwe pachokwadi. Tsanangurira murume wako kuti kutunda kunonaka chose asi kuiswa pasina kutunda kunonaka futi. Uye hezvino zvinhu zvinoita nditunde. Kana tine nguva ngatizviite. Kuisana kunoda kuma 30 minutes kana kupfuura muchirezvana.
Posted by Mai E Chibwe at 16:43 1 comment:
Mibvunzo nemhinduro 16
Pamibvunzo apa kana yasvika 50 tinomirira ipapo totanga rimwe gurupu. Gurupu 15 yakazara saka tava kutanga rino Gurupu 16. Zamai kusabvunza zvakambobvunzwa ku Gurupu 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Tanga watarisa kuti mubvunzo wako uripo pa ne mamwe magurupu here? Vanoda kuwedzera wedzerai asi tanga nokutaura kuti uri kuwedzera pamubvunzo upi uye wedzera pagurupu rine mubvunzo wauri kuda kuwedzera.
Kana une mumbvunzo waunoda kubvunza tarisa apo pakahi MUBVUNZO
1 Ndini Sally, ndine 19 months ndaroorwa asi ndine dambudziko rokuti murume ndomuda chose uye iye anondida asi pabonde handisviki chaipo ipo nechombo , but ndiri ndega ndinosvika. Murume ane zvese zvakakwana uye anoshanda basa. Ini ndini ndine dambudziko. Tine mwana one. HELP. Murume kana wati anokuda, iwe uchimuda, zvoreva kuti munofanira kushanda pamwe chete kugadzirisa nyaya dzenyu. Kuti murume ahi anogona basa anofanira kumboita nguva muchirezvana kuti unatse kunyorova. Zvadaro okukuitira nguva refu kubva pakupinzana kusvika paanokudiridzira, toti maminitsi anopfuura manomwe. Vanhukadzi vakawanda panguva yakadai vanenge vasvikawo ipapo pauri kuti chaipo ipo.
Asi hwisisa kuti kune mhomho yevakanhukadzi vasingasvitswipo nengari yokusnandhwa nechombo chete. Ava vakawanda zvokusvika pa 65%. Vanoda kuti uku murume ari pabasa uku iwe muridzi uri kuzvikwizirirawo bhinzi nemaoko.
Zvinohi 25 % yevanhukadzi vanosvitswa ipo ipo nehombo chete, saka ngatisakasira kufungira kuti varume ndivo vane dambudziko. Pamwe ndisu. Kana uchida kuona kuti unoita nyore here kusvitswa ipo ipo nechombo chete pasina kukwizirira bhinzi, unokwanisa kukumbira murume wako akupime kutarangana kwakaita kubva paburi rechirubu (kumusoro kwakananga kuguvhu) kusvika panotangira bhinzinechokuzasi. Kana kutarangana uku kukaratidza kuti kwakapfuura 2.5 cm, zvoreva kuti uri munhu anonetsa kusvitsa ipoipo nechombo chete, panoda kukwizirira bhinzi.
Pamwe ndosaka uchiti uri wega hauna dambudziko. Saka apa tiri kuti tese tinoziva kuti kuiswa kunonaka hako chose asi dzimwe nguva unenge uchihwa kuda kunatsosvikawo chaipo panodzivaidza muviri. Chombo chega kune vamwe hachizvikwanisi saka iwe muridzi isa maoko pakati uzvikwizirire bhinzi murume achikushanda nechezasi. zvinokasira kufamba.
2 Ndakawana basa Part time asi tokwanisa kutenga Grocery. Murume anoshanda asi mari yeke haikwani zvese. But now haafariri kuti ndishande. Ndoita sei? Kune varume vanoshushikana pamoyo kana mukadzi wake achimukawo achienda kubasa. Ingari yokuti vanoona mukadzi semwana mudiki anofanira kuchengetwa uye kugara ari panoonekwa nokuti kana akahi noumwe murume bvisa bhurugwa ndivate newe haakwanisi kuramba. Ndiwo maonere avo. Kumuka uchigeza uchipfekawo zvakanaka zvinoita varume vaone kunaka kwako zvinova zvisingafadzi murume wako.
Koitazve vamwe varume vanofunga kuti uri mumba nokuti hauna kumwe kwaunokwanisa kuenda nokuti hauna mari. Zvino ukazoita mari zvoonekwa sokuti wava kuzvidza murume.
Koitawo vamwe vanohwisisa kuti munhu anohi Mai nhingi ava munhu mukuru saka anozvifungira. kana achida kuhura anokwanisa kuhura zvisinei kuti anoshanda here kana kwete. Ava vanogamuchira kushanda kwake mhuri yoenderera mberi.
Iwe zviito zvako ngazvichidzikamisawo hana yemurume wako. usazotinyadzisa nokuwana chimwe chokuita chisina kodzero. Napo napo murume wako achatanga kuita CNFIDENCE newe. Musapopotedzana panyaya iyi uye iwe hwisisa kuti murume wako haasi kuviitisa. Ndiwo maonere ake kusvika iwe wamutaridza kuti hapna chaanotya.
3 Chii chingaitwe kana murume aita girlfriend mukadzi ozvibata asi murume achida girlfriend yake zvese nomukadzi? Anoda vese.
Kuti tidavire mubvunzo uyu ngatitange nokubvunza kuti
" Chii chingaitwe kana mukadzi aita boyfriend murume ozvibata asi mukadzi achida boyfriend yake zvese nomurume? Anoda vese."
Kana tawirirana pamhinduro yemubvunzo uyu tichazowiriranazve pamhinduro yemubvunzo wekutanga.
Ini kuona kwangu kana umwe wako akatanga kuhura akakuudza kuti anoda mese, zvoreva kuti iwe chibvapo undotsvaka kumwe. Zvepano zvakuperera.
kana murume/mukadzi wako asingaguti newe, ngaataure nyaya igadziriswe, kwete kundotsvaka umwe.
4 Pane mushonga wekukudza mazamu here? Pane zvinhu zvina mushonga unozvikudza pamuviri wemunhu zvinoti
Asi unokwanisa kundoitwa OPERATION kuchipatara kana une mari asi hazvizoiti kuti nhengo idzi dzishande sezvadzaichiita kare.
5 Unoziva sei kuti uchiri mhandara Kana usina kumbopinzwa chombo muchitubu kana kumashure, zvisinei kuti wakabvaruka chivharo, zvoreva kuti uri mhandara.
Kana wakambopinzwa, zvisinei kuti hauna kubvaruka chivharo chechitubu, hausi mhandara.
Mhandara munhu asingazivi murume. Hazvinei kuti unogaroshandisa VIBRATOR kana maoko kuzvinakira here kana kwete. mhandara dzakawandisa dzinozvidhonza matinji uye kuzvikwiza bhinzi kusvika aguta. Asi hazvibvisi humhandara hwemunhu kusvika murume akupinza chombo.
Vakomanawo vanozvirhoja maoko kashanu pavhiki kana kupfuura asi anoramba ari jaya chete kusvika apinza chombo mumukadzi. Hakuna mukana wekutaridza umwe munhu kuti uri jaya here kana kuti mhandara. ndezvokurondedzera chete kuti Ndiri chokuti. Iye kana ada kubvuma kana kusabvuma zviri kwaari asi hapana chingamuratidza.
6 Chii chinokonzera kusura kwechitubu panguva yebonde? Tanga waverenga pandakambotsanangura nyaya iyi muna 2012, Kana wapedza ukasanatsohwisisa, wobvunzazve. Asi Kana tichiita SUMMARY tonoona zvinhu zviviri zvinoti :
1 Maitire enyu anoitisa mweya upinde mukati
2 murume ane chombo chakakora anokonzera mweya kupinda wobva wavharigwa wotadza kubuda, kusvika PURESHA yawanda.
7 Tinoshandisa maCondom. Kana boyfriend yangu akabvisa condom ndinonakirwa zvakasiyana here?
Handisi kuda nhumbu but ndiri kuda kungoziva kuti zvakasiyanei Kusiyana kwazvo kune nyaya dzaunofanira kuhwisisa.
1 Kana muchishandisa makondhomu munosvika pamwe pamunhombomira zvamuri kuita modzingana nezvekupfeka makondom. Zviri nani kuti muite tsika yokuti mukadzi apfekedze murume kondomu achishandisa maoko maviri. Zvakanakira kuti unowana mukana wekurezva chombo chomurume ako kusvika chamira zvaunoda kuti umupfekedza kondhomu.
2 Pakuisana haunei nezvemimba izvo saka hautyi. Fungwa dziri pakunakigwa chete chete.
3 Murume anononka kukudiridzira kureva kuti unonakigwa pakuisana kwenyu. Unokwanisazve kutenga makondhomu ane mutsetse anowedzera kukwiza mukati mako zvinova zvinonaka.
4 Asi kuiswa pasina kondhomu kunonaka zvakasiyana iri ngari yokuti iwe wega fungwa inokuudza kuti une chombo mukati chemurume wako uye muri kukwizirana ganda. Zvakati siyanei manakire azvo.
8 Chii chinokonzeresa kusanakirwa nemurume pabonde? Ndibatsireiwo please. Pana zvakawanda zvinokwanisa kuti usanakigwa nomurume zvikuru kana muri vechidiki muchangotanga kuva mukadzi nomurume. Zvinokwanisa kutora nuva kujairana, uye kujaira kuisana. Kana musina EXPERIENCE yokuisana munokwanisa kusahwisisa mafambire emuviri wemunhukadzi.
Zvinokwanisikazve kuti pamwe hausi kunatso nyorova saka zvinokwanisa kugwadza.
Pamwe wakatizira saka haunatsi kuziva kuti murume anokuda here kana kwete. Pamwe hama dzake hadzina hanya newe.
Pamwe uri kutadza kubata mimba saka fungwa yako iri pakuda mimba wobva washaya nguva yokufunga zvokunakigwa.
Pamwe makambohurirana saka hauna kugadzikana hana panyaya dzokuisana. Pamwe wakamboita chigwere chechihure chikakutyisa chose.
Pane zvokonzero zvakawanda. kana pane chiri kukudya moyo ndinyorere tione kuti pane chatingaona here chokuita.
9 Kana uchitanga kurara nemurume zvinorwadza here musi wekutanga wacho?
Zvinobva nokuti murume waunaye anohwisisa here kuti unokwanisa kugwadziwa, uye kuti iwe une makore mangani. Kana une makore ari pasi pe 18, zviri nani umbomira kusvika wawedzera kukura.
Tanga nokubvumirana nomurume kuti uri kuda kuiswa kuti asamhanyamhanya pazviri. Muudze kuti aterere zvauri kumuudza pakuisana kwenyu. Kana mukambobatanabatana kusvika wanatsa kunyorova, ukazovhura makumbo wovata nomusana moisana makadaro kwete mamwe maitire, zvinoita nani.
Ngaakupe chombo iye osafakanyika kusvika chapinda. Iwe ndiwe unosimudzira chiuno uchipfekedza chombo nechitubu. Iye ngaasafosa chombo kupinda. Iwe ndiwe unosundura chiuno pachombo kuti chipinde. Ndiwe unokwevera murume kuti apinde.
Zvinogwadza asi unongoita sewabaiwa netsono zvobva zvatopera nguva dikidiki wotohwa chombo chazara mukati mako, mava kutoisana. Kana murume asina kujaira, anokwanisa kutokudiridzira napo napo. Unokwanisazve kutobata mimba ipapo saka shandisai kondomu kusvika mava kuda mwana.
10 Chii chinokonzera mapundu muhapwa? Mapundu ese atisingazivi kuti abvepi anoda kuendwa nawo kuCILINIC. Please. Enda kuCLINIC uvataridze vakuudze kuti chii uye zvoitwa sei. Musaita tsika yokuchengeta zvigwere mumba nokuti inyaya inokanganisa muviri.
11 Ko inonzi G- spot yemukadzi inobatwa papi uye sei? ndingaziva sei kuti ndaibata? Kana mukadzi avete nomusana akapatsanisa makumbo, Gspot yake iri mukati mechitubu kumadziro ekumusoro (CEILING) saka ukapinza chigumwe kana ava nezemo, ukatsvanzvadzira kumusoro uchahwa pakaita kunge bundu kana kuti kuzvimba mukati ndiyo G spot yacho. Kana muchiisana mukadzi akafongora akadhefura musana anohwa kugofiwa pa Gspot. Zvinonaka. Kana mukadzi akapakicha makumbo pamafudzi emurume anokwanisazve kugofiwa panhu apa.
12 Kuita mimba uchiyamwisa kune zvakaipa here? Kana wazvara mwana, unokwanisa kubata imwe mimba kwapera mwedzi miviri chete chete saka kuzvara hakukuregesi kubata mimba. Asi zvinozikamwa kuti kumwisa mwana wawazvara zvinokonzera kuti unonoke kutanga kuenda kumwedzi. Asi kana wangotanga kuenda kumwedzi zvotoreva kuti wava kukwanisa kubata mimba. Hwisisazve kuti unokwanisa kubata mimba kwasara vhiki mbiri kuti uende kumwedzi. Izvi zvinoreva kuti kana wazvara mwana, unokwanisa kuita imwe mimba usina kutomboinda kumwedzi.
Kana wabata mimba uchiri kumwisa mwana, hapana chakaipa kuti urambe uchimwisa mwana mukaka. hapana chingaitika kwauri kana kumwana asi kungoti simba rinodiwa pakugadzira mukaka rakawanda kozotizve simba rinodiwa pakuumba mwana muchibereko rakawanda futi. Koitazve kuti maHORMONE ako anosiyana nezvinodiwa pakungoita chimwe chete chezviviri izvi.
Zvakadaro zviri nani kuti mwana kana ange apfuura mwedzi mitahatu achimwa mukaka, wochirumura kuitira kuti muviri uchiona nezveuyo ava muchibereko. Asi kana mwana ange achiri mucheche unokwanisa kuramba uchimwisa.
Hapana chakaipa kurega mwana achimwa mukaka. Kare vakuru vaiti zvisaitwa vachifunga kuti pane Poison inoitika mumuviri, asi bodo hapana. Kungoti zvinogozhera muviri wako.
13 Kana mukadzi akazvitakura kana akatanga kubuda mvura kuzasi zvinorevei? Kana achingobudawo tumvura tushoma tusinganhuwi, zvinokwanisika kuti hapana chakaipa, Asi kana achivhinza zvoreva kuti pane dambudziko saka munofanira kunge matomuendesa kuchipatara.
Kana pamberi pachinhuhwa zvoreva kuti ane INFECTION inoda kukasira kurapiwa.
Kana munhu ane mimba anowedzera chose kubuda mvura yakaita kuchenuruka uye ichingova nehwema hweukadzi sezvaunongoita kana ukapinza chigumwe muchitubu ukanhuwidza wega. Mvura iyi inotoramba ichibuda kusvika wazvara mwana uye inotanga uchangotanga mimba. Haina chakaipa pairi. Vamwe varume vanoti hwema hwacho hunohwikwa paganda remukadzi sokuti pakubatana batana moda kuisana. Vanoti zvinokasirisa chombo kumira. Hapana chakaipa. Usatyiswa nazvo. Kungopheka panty liner chete kuti usangoswera nebhurugwa rakanyorova.
Kana akaenda kuhosipitari vanokwanisa kuongorora zvese kuti ane zvigwere here uye zvipi zvacho asi havakuudzii kuti abatwa chii kana ane zvakaita se HIV. vanonyarara kune dzimwe hospitari. Ku Europe ne America, autralia vanokuudza. Ndakamboshandako. Vanokudaidza vokutsanangurira zvokuita kuti mwana asabata chigwere china mai.
14 Ndoitawo sei, ndakabatwa nechirwere? Kana wakabatwa chigwere watova munhu anoziva kuti une chigwere saka chidzidza kuti chigwere chako chinofamba sei pakurapiwa uye pakuchengetedza utano hwevamwe vari pedo newe. Hauna kutaura kuti wakabatwa chigwere chipi saka handikwanisi kukuudza kuti zvoitwa sei. Ivo vakakubata chigwere vanokuudza zvokuita. Zvimwe zvigwere zvinoda kukasira kutanga kurapiwa. Zvimwewo hazvirapiki. Iwe hwisisa chako kuti chiri papi.
15 Kusaenda kumwedzi kunoitiswa nei? Zvikonzero zvokusaenda kumwedzi zvinovunzwa chose pano. Zvinoti
1 Kana wakaondoroka zvokuti mabhonzo anotoonekwa
2 Kana wakakoresa
3 Kana wava munhu mukuru apfuura makore 32 unokwanisa kunge usisina mazai ekukandira zvinova zvinokonzera kuenda kumwedzi
5 Kana une mimba hauendi kumwedzi.
6 Kana wakabviswa chibereko pa Operation.
ndizvo zvokonzero zvikuru izvi.
16 Ndoda kuziva kuti mushonga unorapa maronda emudumbu unowanikwa kupi. Maronda emudimbu anohi ma ULCERS anoitiswa ne
· Kugaromwa mapiritsi anohi Naproxen
· Kugaromwa mapiritsi anohi ibuprofen
· Kugaromwa mapiritsi anohi Asprin
· Kugaromwa mapiritsi ari muboka reawa
· Kuva neutachiona husina kodzero mudumbu hwakaita se humwe hunohi H. PYLORI
Unoziva sei kuti une maronda mudumbu
· Kugarohwa mudumbu muchigwadza zviri pasi asi pamwe zvichiwedzera, uye kuti pamwe uchangopedza kudya mudumbu mombomira kugwadza.
· Kutanga kuondoroka
· Kuhwa usina hanya nokudya
· Kuda kungorutsa zvinhu zvakasviba ruvara
· Kudzvova zvakawedzera uye kuita nyon’o
17 Kudadzira nzira yemwana kunoitwa sei. Kana une mimba, uchida kuzvara zviri nyore, zvikuru mimba yokutanga, tanga wahwisisa kuti mupasi rese mune nyika dzinoita 195 munogara vanhu vanopfuura mabhiriyoni manomwe. Isu tega tisu tine nyaa yokugadzira nzira yomwana.Saka zvibvunze kuti ko vamwe kunyika dzese idzi vari kuzvara sei vana vavo.
Muviri unoziva wega kuti nzira yomwana inogadzigwa sei. Usazvinetsa nazvo. Zvinoitwa ne MaHORMONES. Asi mahormones acho anoti wandei kana uchigara une mufaro une mimba uye zvikuru uchigaro piwa urume nomurume wako uye uchiita maORGASM akawanda une mimba. Ndiwo mushonga mukuru uyu. Zvimwe zvese hapana chazvinorapa zvakaitigwa kuti ugadzikane hana panyaya yokuzvara uchifunga kuti hazvigwadzi. Paunozoona kuti zvinogwadza unenga usisina kwekuenda.
Usaita hanya nenyaya iyi zvachose. Ingogara pedo nomurume wako woita tsika yokuvata naye nokumukwezva kuti avate newe. Iwe wowedzera hope. Kukasira kundovata kunonoka kumuka. Asi moisana zvisingaiti akutsimbirire dumbu. Vata nedivi iye ari kumashure, Wosimudzira gumbo nokugonyera mberi murume opinza. Kana kuvata manhede murume ari padivi pako womusimudzira gumbo riri divi rake opinza chombo moita.
Sinyana nezvemishonga kana une mimba unokuvadza mwana wako uchiudzwa nhema nevanhu vasingazivi kuti zvakaitiwei nevakuru vedu.
18 Mukadzi kana asingatereri murume zvingaitwa sei? Verenga apo pandaisa mhinduro nokuti pano haikwani. yakarebesa kuidavira pano.
baya apa Mukadzi asingatereri murume
Kana usina kuhwisisa ndinyorere umwe mubvunzo panyaya .
19 Murume/mukadzi asingade kuti mumwe abate foni yake, ndizvo here. Iwe kana une mukadzi wako kana murume wako, chokutanga uchaona kuti pane zvinhu zvaanochengeta zviri PRIVATE zvausingafaniri kuona kana asingadi kuti uone. Iwe basa rako kuhwisisa kuti chinhu chiri PRIVATE ndechipi.
1 Usatarisa foni yake kana asina kukupa kuti utarise.
2 Usapfeka zvipfeko zvake kana adina kukupa kuti ipfeke.
3 usamupendira mushawa. mutoilet kana apinda akavara mukova.
4 Kana ane COMPUTER /TABLE usatarisa HISTORY yake uye kana ukaiona usamubvunza azviri. Nyarara.
5 Varume vanoda kuti dzimwe nguva aite chimhandara maoko ari ega. Kana ukazviziva kuti ndiwo maitire ake, usamubvunza pazviri. Vanoti manakire azvo akasiyana nokuisana nomukadzi wake.
6 Vakadziwo vakawanda chose vane varume vanovakasirira vanozvipedzisa nemaoko murume abatwa nehope. Kana ukapepuka, ukawana mukadzi wako ari mubishi remaoko, nyarara pazviri asi hwisisa kuti haasi kuguta.
Hwisisa kuti muri pamwe chete asi muri vanhu vaviri.
20 Ndiri kuda kudzidzisa vakadzi bonde. Nyora hako bhuku uritengesera vakadzi. Iwo mafungire ako okuti unoona sokuti unokwanisa kudzidzisa vakadzi ndiyo inohi pachirungu ARROGANCE. Dai wangoudza mukadzi wako wawakatodzidzisa kare kuti audze vamwe kuti chii chaakadzidza.
21 Tingaita sei kuti tizvare mwana mukomana Tanga waverenga apo pakahi
zvinokwanisika kuti musarudza kuti mwanai asi hazvisi nyore.
22 Ndoramba murume here chombo hachina simba? Mafungire iwawa ndiwo anoitisa kuti chombo chake chishaye simba. Kana une murume, mese muri vaviri munofanira kubatsirana kugadzirisa matambudziko anouya mumba menyu. Makaroorana kuti mugare pamwe chete mumufaro nomumatambudziko.
Kana murume achiratidza kuva nedambudziko iri, zvinokwanisika kuti ane chigwere chomoyo kana kuti DIABETES, and zviri nani kuenda naye kundoonekwa nevarapi pane kumuramba. Haungarambi munhu uchiti nokuti ane chigwere. Mafungire akaipa iwawo nokuti iwewo uchagwara.
23 Chii chingasaka kuti murume aite bonde kamwe chete pausiku hwese? Zvinobva nokuti magara mese nguva yakareba zvakadii. Iwe kana uchida kuti muvatane kakawanda usiku, unofanira kutaurira murume kuti unoda kumutswa usiku. Kana asingazivi kuti ndizvo zvaunoda pamwe ari kutotya kukumutsa achifunga kuti unomupopotera. Kune vakadzi vakawanda chose vasingafariri zvokumutswa usiku.
Iwe ukapepuka usiku murume ari kuhope, purudzira chombo chimire uzevezere murume kuti ngaapinze. Anokwanisa kuvata newe ari kuhope. Kana kuti mangwanani kuma 5 chombo chinenga chimire chega nokuti ndiwo maitire acho kana muridzi avete. Sakaiwe ita tsika yokuratidza kuti unoda kuvata naye nguva iyi. kumirira munhu kuti afembere zvaunomufungira hazvibatsiri chinhu.
24 Kana mukadzi azvara anogara nguva yakadini asina kuvata nemurume? Varapi vanoraira kuti ngakupere mwedzi nehafu kana kuti vhiki nhanhatu (6). Kana pasina chakaipa munokwanisa kutanga kuisana. Kana pane chakaipa tangai mabvunza varapi.
Asi hwisisa kuti anokwanisa kubata mimba kubva pamwedzi umwe chete azvara saka kana achimwisa mwana imboshandisai kondhomu kusvika arumura. Usashandisa tsika yokuisana musina kondhomu muchifunga kuparadzana kana woda kudiridzira. Haishandi tsika iyi nokuti kuisana kunonaka zvokuti munongozoerekana matopanana urume.
25 Ndeipi mishonga inoshandiswa kupfuhwira murume kuti asakunetsa Kana uri munhukadzi mushonga wakanaka kupfuura yese uye unoshanda chose kupfuhwira murume wako uri paviri panoti muvuri wako, uye fungwa dzako. Shandisa muviri wako, zvikuru chiuno, pamurume wako. Garofunga zvakanaka zvokuitira murume wako. Kana ukagumbuka pane zvaaita, pedzera shungu pamurume wako, hasha dzese dziende muchiuno. kwete kupopota nokumutsoropodza Muudze kuti wagumbuka asi ngaahwisise usina kupopota.
26 Ndinogarorota ndichiisana nomurume. Kurota wakavata nemurume zvinokonzerwa nei? Vanhu vese vaunoona vachizvifambira vanomboita nguva vachirota vachiisana noumwe munhu. Usazvinetsa panyaya iyi. Tese tinorora tichiisana noumwe munhu. Pamwe hauoni musoro wake saka hauzivi kuti ndiani. Pamwe unorota uchiiswa nemunhu wemuraini waunotoziva asi wausina kana chaunoda paari. Hapana zvazvinoreva. Mupasi rese vanhu vanorota vachiisana noumwe munhu. Pamwe unototunda uri kuhope asi uchirota. Usaita hanya nazvo. tese tinodaro nguva nenguva. Muviri wako unogaropurakitiza kuiswa kana kuisa. Zvikuru varume vanopurakitiza kubudisa urume vari kuhope. Kunohi kuzviroreta.
Verenga apa pakahi KUZVIROTERA
27 Kugona kufadza mukadzi pabonde kuita sei? Chokutanga wana mukana wekutaudzana nomukadzi wako panyaya dzokuisa kuitira kuti iye akuudze zvinomunakira iwewo uchimuudza zvinokunakira. Kana mahwisisana chipotai muchiita zvinokunakirai.
Musaisana makati zii semakafa. Murume pota uchizevezera mukadzi muzheve zvauri kuhwa muviri wake uchikunakira. Iywo uchahwa achichemerera nokunakigwa newe.
Kubva pakumupinza chombo kusvika pakumudiridzira pfuura 7 MINUTES. vakadzi vakawanda vanoda varume vanopfuura 7MINUTES, Zvinonaka chose.
Mapedza muudze kuti anonaka chose chose
28 Ndozama asi murume haafariri bonde neni. Tava negore taroorana asi ndatambura. Imbotaura naye pasina zvokupopota kana kuchema asi kungomugarisa pasi womuudza kuti hauna mufaro pamba pako nokuti iye haadi kuvata newe zvakakwana. Womubvunza iye kuti chii chaungaita chaanoona kuti chingabatsira kkuti muwedzere kuvatana.
Kana zvaramba womuudza kuti unokumbira muende kwasekuru vake hazvanzi yamai vake mundobvunza kuti zvoitwa sei. Asi unonokumbira mbuya kuti vaudze sekuru vataure nemwana wavo.
Kazhinji varume vasingafariri zvokuisana pane chiri kuvanetsa mufungwa. Unohwa achiti mukadzi anongoda pese pese. Iwe usataura uchiti unoda pese pese. Buda pachena kuti katatu pavhiki kuti vahwisise kuti haasi kutomboita zvakakwana. Pagore rokutanga vakawanda vanopfuura kagumi pavhiki.
29 Kunamirana muchiisana kunoitiswa nei? Inohi SPASM inoitika mukati memukadzi obva abata chombo chotadza kubuda. Pachirungu zvinohi PENIS CAPTIVUS. Hazviwanzi kuitika asi zvinoitika kunyika dzese. Kana zvaitika munoendeswa kuchipatara mukadzi obaiwa jekiseni rokurerusa nyama dzomuviri kuti murume akwanise kubuda.
30 Chii chinokonzera kuti nhengo yemurume isamira? Pamwe ane chigwere chomoyo, kana BP, kana kuti pane mapiritsi asingaenderani nezvokumira kwechombo aaari kushandisa kana kuti ari kufunganya.
Verenga apo pakahi Murume asingamiri chombo
31 Chekushandisa kudzora hwema hwekuzasi kwemunhukadzi chii? Kana une hwema hwakaipa kubva pamberi hwisisa kuti une utachiona INFECTION saka unofanira kundorapwa nokukasira. Kana uri kure nevarapi tora GARLIC womenya chibazi chimwe chete, wochiboora buri, wosungira tambo, wopinza chibazi ichocho chimwe chete mukati, tambo yosara uchionekera kuti ugokwanisa kudhonza uchibvisa.
Chiisa mukati kana wonovata, wofumobvisa mangwana. Zvinososona chose kwenguva inoita 5 Minutes asi zvinozoti tonho wokwanisa kuvata. Mangwana chaiye unenge usisina IINFECTION kana dziri INFECTION diki. asi enda unoonekwa.
Verenga apo pakahi Kugeza chitubu
32 Kune mushonga wekuti mukadzi kana murume ade zvepabonde nguva dzese here? Mishonga iriko zvikuru yekupa varume asi inokuvadza uye haazokwanisi kumira chombo pasina mushonga. Zviri nani uite murume/mukadzi wekukwezva kumukurudzira kuda kuisana mumba menyu.
Usamuudza nezvekuti kana asingadi unonotsvaka hure. Hazvishandi nokuti zvinotaridza kuti haumudi.
33 Unoona sei kana umwe achipomba/(achihura) Hapana chaunokwanisa kuona. Zvese varume nevakadzi kana achangotanga kuhura anowedzera kuda kuisana mumba menyu saka ndiwo mamwe maonere aungaita.
Kuhura kwevakadzi kwakasiyana nekwevarume. Vakadzi vanovanza chihure kupfuura varume.
34 Ko kugara ndisina bhurugwa kwakaipeiko? Ndikapfeka bhurugwa ndovaviwa. Kugara usina bhurugwa zviri kwauri. Hapana chakaipa pazviri. Bhurugwa harina charinowedzera kana wakapfeka dhirezi rakakodzera kubuda mumba. Ini kazhinji ndinoenda kuSupermarkt ndisina bhurugwa. Ndakakurira mumhuri yange isina mari ndikazotanga kupfeka bhurugwa pandakaenda ku BOARDING School saka ndinohwisisa maitire kana ndisina bhurugwa. Iwewo unokwanisa kunge uri munhu anohwa akasununguka kana usina bhurugwa. Hapana chakaipa.
Vakadzi vakawandisa chose chose munyika dzakawandisa vanopfeka mabhurugwa ekunyebera anohi G-STRING, kureva kuti harisi bhurugwa asi inongori tambho inopfuura nepamberi isina zvainovharadzira. Kana ukakotama wakapfeka G-STING une dhirezi fupi, zvese zvauri zvinongooneka.
35 Ko bhinzi inomira nguva yakareba sei? Bhinzi yemunhukadzi yakangofana nechombo chomurume maitire ayo. Kungosiyana kukura kwazvo chete. Kana murume ane zemo, chombo chake chinomira kusvika zemo rapera, zvisinei kuti rapedzwa nei. Kana Mukadzi ane zemo bhinzi yake inomira kusvika zemo rapera zvisinei kuti rapendwa nei.
36 Ndoita sei. Murume wangu haagoni kundikwira zvinonaka. Before our wedding, way before, ndakamborara nomurume wasisi, sisi vari kuHospital, ndakanakirwa way way more. Hazvikwanisiki kuti murume haagoni kukukwaira. Kukwirana kunoda vanhu vaviri saka haungati iye haagoni ugofunga kuti iwe unogona.
Iwe muridzi, natsa kufongorera murume womubata chombo wochinangisa pako paunoziva kuti ndipo pachinofanira kupinda. Kana changopinda hazviiti kuti uzoti haagoni nokuti iwe une chiuno chaunofanira kushandisa. Iyewo ane chiuno saka mese munokwanisa kushandisa zviuno zvenyu.
Kana ukavata nemanhede ukavhurira murume makumbo kana kuapakicha pamafudzi ake, unokwanisazve kubata chombo wochinangisa pokupinda wosimudzira chiuno kuti anatse kupinda. Zvadaro motokweshana makadaro kusvika umwe atunda kana kuti mese.
Chaunoti haagoni ipapo chiiko?
37 Mushonga wechivanhu unoshandiswa kudhonza matinji unonzi chii? Hakuna mushonga unokonzera matinji kana imwe nhengo temuviri pamurume kana pamukadzi kukura dzimwe ngengo dzisingakuriwo. Hazviiti kuti woisa mushonga pamazamu obva akura muviri wee usingakuri.
Mushonga wekukudza matinji kudhonza chete chete, zvisinei kuti wava nemakore mangani okuberekwa unokwanisa kungodhonza matinji okura. Hapana mushomga unodiwapo. Tese takadhonza waniko pasina mushonga.
38 Chii chinokonzera vakadzi kuhura Kune zvikonzero zvakawanda zvinoonzera mukadzi kuhura asi chikuru chacho kushaya rudo mumba. Kana ukaita murume asina hanya newe kazhinji unopedzisira wahura nengari yokutsvaka rudo. Kune varume vanoti kana muchinri musikana nemukomana, vanotaridza rudo chose asi kana maroorana rudo hapachina. Ivavo vanohurigwa chose.
Kana uchida kuti mukadzi asaona vamwe varume shamwaridzana nomukadzi wako ugare uchiita nyaya dzinofadza naye. Woratidzawo kuti unofarira muviri wake uye unonakigwa nokuisana naye. Kana asipo hauna mufaro.
Ratidza kuti unoremekedza mukadzi wako, uye haumushori kana une mhuri yako. Kana mukapokana unokwezva mukadzi kuti nyaya ipere.
39 Bonde pakati pemusikana nemukomana vanodanana, zvinofamba sei? Kana asiri murume/mukadzi wako muri kuita chihure. Hapana chakanaka chamuri kuita. Kana muchiona kuti munoda bonde rooranai muite zviri pachena nyika yese ichiziva kuti muri vemhuri imwe chete.
Chihure chinouraya, zvikuru kumunhukadzi nokuti musi waunorambwa nomukomana wauri kufunga kuti uri kudanana naye ndiwo musi waunohwisisa kuti waitambisa nguva yako uchivhurira munhu makumbo asiri murume wako.
Chihure siyanai nacho.
Posted by Mai E Chibwe at 15:25 No comments: